Ahoana no ho lasa blockchain developer - Blockchain News
Raha toa ianao ka manonofy ny mamorona manokana cryptocurrency, ny fianarana ny fomba manoratra marani-tsaina ny fifanarahana sy ny fampiharana blockchain, nefa aza mahalala Programming, na raha efa-dalam-pandrosoana nandritra ny fotoana ela, fa afa-nianatra momba ny cryptocurrencies sy te-mamerina manofana, azo atao. Ao amin'ity lahatsoratra ity, dia hilaza aminao ny fomba tsy miankina handalina ny fanontaniana, Inona no fahalalana ho mahasoa sy aiza no ahitana azy ireo.
Inona no fototra ilaina ho an'ny fampandrosoana blockchain?
Raha miresaka momba ny fampandrosoana ny marani-tsaina fifanarahana eo amin'ny sehatra sasany, ohatra, Ethereum, avy eo ny “base” Tsy ilaina. Mila ihany ny fahafahana mampiasa ny fikarohana sy ny faharetana kely. tena, dia nanan-anaka fifanarahana mahay indrindra, mba hamorona ny olona izay tsy tena tsara Coding. Ny hany olana mety hitranga dia ny tsy fahampian'ny fitaovana fanofanana, satria izany teknôlôjia izany dia tena tanora.
Raha miresaka momba ny fampandrosoana ny tenantsika blockchain, dia lehibe fototra ilaina. Ihany anefa no dia tsy ho ampy.
Inona no fahalalana mendrika mividy
Ny zava-dehibe indrindra dia ny hahatakatra ny fomba asa ny teknolojia. Ny ankamaroan'ireo voafetra amin'ny fampandrosoana blockchain dia mifandray amin'ny mampihavaka ny teknolojia, izay tsy mamela ny fampiasana ny fomba sasany projection. Noho izany, ny voalohany olana mipoitra mandritra ny sehatra asitrika dia mifandraika. Na izany aza, rehefa manana ny fahatakarana ny teknolojia ihany, olana mba hahafehy iray amin'ireo fandaharana ny fanoratana mahay fiteny fifanarahana hitsangana intsony. Ankoatry ny, Fahazoan-dalana mankany tsara aho mamaky ny White Paper ny cryptocurrency, miorina, izay ataonareo no handeha hosoratako ato marani-tsaina fifanarahana.
Moa ve azo atao ny mianatra tsy miankina na tsara kokoa handray taranja manokana?
Mazava ho azy, fahalalana rehetra izao dia afaka ho vidiana tsy miankina, raha kely indrindra, satria ny ankamaroan'ireo tetikasa dia nalahany teo GitHub. Ny tena olana dia ny hafainganam-pandeha ny fahazoana fahalalana. Etsy andaniny, be dia be ny fanazavana momba ny blockchain, fa dia tena marivo, toy izany ny ankamaroan 'ny fotoana dia handeha sivana ny angon-drakitra. Etsy ankilany, misy loza fa mamerina fotsiny ny asa rehetra ny mpampianatra, handika ny fehezan-dalàna rehetra avy ao amin'ny boky, nefa tsy hianatra na inona na inona. Ary noho izany, Naka fahazoan-dalana aho antokony haingana izay afaka mahazo fahalalana fototra sy ny mifanitsy manao fianarana tena, ohatra, mametraka tanjona – ho fampiharana ny tetikasa manokana.
Inona no fandaharana fiteny no ilaina?
Mino isika fa tsy misy dikany ny manavaka ny fiteny fandaharana ny ambaratongam-ilaina ny mianatra zava-baovao. Ny fiteny fandaharana fitaovana ihany izay mety ho toe-javatra sasany.
Ao amin'ny orinasa lehibe avy any Silicon Valley amin'ny ankapobeny tsy misy zavatra toy izany ho toy ny developer ao amin'ny iray na fiteny hafa. Koa raha afaka fandaharana dia lehibe miampy. Raha manana ny fahatakarana ny fomba hanaovana izany araka ny tokony ho, mahalala ny fitsipika fototry ny fanorenana sy maritrano projection fomba lehibe kokoa aza dia miampy.
Mahasoa loharanom-baovao ho an'ny mpanao voalohany pahaizana manokana
Tsy fahazoan-dalana ny boky developer Marina M. Antonopoulos. koa, mila mamaky White Paper ny cryptocurrency, ny fototry ny halehanao mba hampivelatra. Rehefa avy mahatakatra ny teknolojia ihany, ho amin'ny famakiana ny tahirin-kevitra. Tsy fahazoan-dalana mankany avy hatrany manomboka amin'ny famonoana ny arivo sy iray Tutorials, satria noho ny zava-misy fa ny teknolojia dia tanora ampy, afa-tsy ny taratasy ofisialy dia afaka manompo ho hany loharanom-baovao azo antoka.
Rehefa avy nianatra ny tahirin-kevitra, dia afaka mandeha hanatanteraka tsotra Tutorials. Raha ny fehezan-dalàna ohatra, misy olona maro loharano misokatra tetikasa izay mora ny mahita ao amin'ny GitHub.
Koa ankehitriny, misy vondrom-piarahamonina ho an'ny mpandraharaha, telegrama amin'ny chat, -tserasera taranja, vondrona in LinkedIn sy ny sisa, Dia tsy tokony ho olana ny fikarohana ho an'ny fiaraha-monina.
Ahoana no ho lasa blockchain developer?
Previous Post:Blockchain News 30 Janoary 2018
Next Post:Blockchain News 31 Janoary 2018